Nhasi anotanga Dambudziko reZuva reMarudzi reVakadzi | Ndinobva mac
Nhasi, Kurume 8, isu tatova nedambudziko reInternational Women's Day riripo uye vese avo vashandisi vane Apple Watch vanogona kuita iri dambudziko zviri nyore kufamba anenge 1,6 km netsoka, kumhanya kana pawiricheya.
Chinetso icho chinofambidzana nekuwana zvitambi zvekutumira neMessage application pane yedu iPhone, inouya nguva pfupi pamberi pemwedzi weiyo yapfuura Dambudziko yakataurwa neApple kune vashandisi, iyo yeMoyo Mwedzi umo isu taifanira kuita vhiki imwe yekurovedza muviri mutsara.
Zvinetso zvinotikurudzira kutamba mitambo
Vazhinji ndivo vashandisi vari kuwedzera kushingaira nekuda kweApple Watch uye aya marudzi ematambudziko. Iwe unotanga kumhanya kana kufamba aya 1,6 km uye iwe unopedzisira waita yakafanana vhiki nevhiki kudzidziswa kuti uwane chimiro uye izvi zvakanaka kwazvo nhasi. Kunyangwe tiine nguva shoma, kana iwe uri wenguva dzose, unogona kuzadzisa izvo iwe zvawakaronga kuti uite. Uye mune ino kesi, kutanga nedambudziko rakareruka senge iri kunogona kuve kutanga kwehupenyu hwakagwinya uye ndosaka tichitenda kuti zvakakosha kuita mhando dzematambudziko.
Mune ino kesi, iyo Dambudziko reInternational Zuva reVakadzi rinotibvumidza isu kutanga nechimwe chinhu chiri nyore icho chero munhu anogona kuwana uye zvangove kungoenderera nekuita chiitiko ichi kuti uve noutano hwakanaka. Nhasi rinogona kunge riri zuva rekutanga asi kwete rekupedzisira, saka munhu wese anoenda kunetsa iri nyore asi rinoshanda iro Apple ratipa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Nhasi anotanga Dambudziko reZuva reMarudzi reVakadzi
Kopi yepirati yeAkaman muna 4k, inoratidza kuti kudzivirirwa kweTunes kwakatyorwa
Iyo Sims 2: Castaway Nhau dziripo chete yuro